प्रचण्डले बादललाई गृहमन्त्री बनाएपछि माओवादी केन्द्रभित्र बबण्डर, बर्षमान पुनले दिए यस्तो धम्की ! — Sanchar Kendra
प्रचण्डले बादललाई गृहमन्त्री बनाएपछि माओवादी केन्द्रभित्र बबण्डर, बर्षमान पुनले दिए यस्तो धम्की !
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राम बहादुर थापा ‘बादल’लाई गृहमन्त्री बनाएपछि माओवादी केन्द्रभित्र बबण्डर सुरु भएको छ ।
गृहमन्त्री बनेका बादल हुन् चाहिँ को ?
प्रदेश नम्बर ३ बाट राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ माओवादी केन्द्रका महासचिव पनि हुन् । गत माघ २४ गते भएको निर्वाचनमा बादल ३ हजार ३ सय ९६ मतका साथ राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चितवनको तत्कालीन २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका बादल दोस्रो संविधानसभामा भने उम्मेदवार बनेनन् । त्यसबेला उनी मोहन वैद्यले नेतृत्वको गरेको माओवादीका थिए । उक्त पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।
यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री थापाले ‘पोजिसन’ लिएर प्रचण्डलाई उक्साएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
६३ वर्षीय बादल गुल्मीको बडागाउँमा जन्मिएका हुन् । भारतीय लाहुरे कर्णबहादुर थापा र नन्दकुमारी थापाका छोरा थापा इन्जिनिर पढ्न तात्कालीन सोभियत युनियन गएका थिए ।
नेपालबाट आईएस्सी एजी गरेर सोभियत युनियन गएका थापा नेपालमा जनवादी क्रान्ति सपना उनेर बीचमै छाडेर नेपाल फर्किए ।
लगत्तै भूमिगत राजनीतिमा होमिए । ३७ देखि राजनीतिमा होमिएका थापाले त्यसपछि लगातार ०६३ सालसम्म भूमिगत राजनीतिक जीवन बिताए ।
जनयुद्ध कालमा माओवादी–सरकार वार्ता टोलीको सदस्यका रूपमा दोस्रो वार्तामा थापा सार्वजनिक भएका थिए । त्यसबेला उनी सबैभन्दा आकर्षणका केन्द्र बनेका थिए । थापाले ०३८ देखि ०३९ सम्म बन्दी जीवनसमेत बिताएका थिए ।
थापा राजनीतिमा प्रवेश गरेको केही समयपछि नै पार्टीको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् । जनयुद्धको तयारीको क्रममा रोल्पामा लामो समय बसे । जनयुद्धलाई हाँक्नसमेत भूमिका निभाए ।
उनी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन सिपालु छन् । थापा त्यस्ता नेता हुन्, जो पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यबाट साधारण सदस्यमा झरी पुनः पोलिटब्युरोमा पुगेका थिए ।
चितवनको भरतपुर नगरपालिका १० नारायणटारमा थापाका परिवार बस्छन् ।
उनका १ छोरा, १ छोरी र एक श्रीमती छन् । श्रीमती नैनकला थापा महिला आयोगकी अध्यक्षसमेत भइसकेकी छन् । पार्टी एकतापछि उनले प्रचण्डलाई निरन्तर सहगोग गर्दै आएका थिए ।
मात्रिका यादव को हुन् ?
वन मन्त्री भएको बेला २०६५ असार ४ गते जिल्ला विकास समिति ललितपुरका एलडीओलाई शौचालयमा थुनेर चर्चामा आएका मातृका यादव पुनः मन्त्री भएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, त्यतिबेला उनले रक्तचन्दन तस्करीलाई पनि चर्चामा ल्याएका थिए । उनी आफै रातिराति गएर ट्रकका ट्रक रक्तचन्दन समातेर सिंहदबारमा थन्क्याएका थिए । रक्तचन्दनको पनि तस्करी हुन्छ भने कुरा त्यतिबेला मात्र जनताले थाह पाएका थिए । तर, उनी मन्त्रीबाट हट्ने वित्तिकै रक्तचन्दनको चर्चा फेरि हरायो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भनाभन गरेको विषय पनि त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको थियो । पछि उनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बन्दा सिरहामा जग्गा कब्जाको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका थिए ।
यिनै मातृका यादव मन्त्री बन्न लागेका हुन् । इमानदार र हठी नेताको रूपमा परिचित मातृका यादव त्यही कारणले माओवादी पार्टी छाडेर हिँडेका थिए । उनी माओवादी पार्टी छाडेर हिँडेपछि छुट्टै समूह चलाएर मधेसमा आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए ।
दुई वर्ष अगाडि माओवादीमा फर्केका यादव धनुषा १ बाट पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका हुन् । माओवादी शन्ति प्रकृयामा आएपछि अन्तरिम सांसद बनेका मातृका यादव पहिलो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक सांसद बनेका थिए । उनी सांसद हुँदैको अवस्था पार्टी छाडेका थिए र त्योसँगै उनको सांसद पद पनि गएको थियो ।
२०७० को संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरेका मातृका यादव धनुषा १ बाट चुनाव जितेपछि उनी मन्त्री बन्न लागेका हुन् ।
२०३४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) बाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका मातृका यादव विसं २०३६–३८ सम्म उनी सिरहा क्याम्पसमा दुई पटक अनेरास्ववियुको सभापति बने । त्यसताका उनको एउटा भाषणले सबै विद्यार्थीले उनलाई नै मत हालेको कुरा त्यतिबेला निकै चर्चित थियो । विस २०३८ मा विद्यार्थीको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य बने । त्यसताका सङ्गठन भूमिगत थियो । राजधानीबाट उनी इन्द्रचोकबाट पक्राउ परे ।
२०३८ चैतमा समातेर उनलाई डिल्लीबजार खोरमा चार महिनासम्म राखिएको थियो । त्यहाँ उनले ठूलो सङ्घर्ष गरेका थिए । जेलभित्रै अश्रुग्यास र गोली चल्यो । आफूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दा जेलका नाइकेहरू मातृका यादवमाथि आक्रमण गर्न गएका थिए । त्यतिबेला मातृका यादव लगायतले जेलको गेट कब्जामा लिएका थिए । विसं २०३९ मा जेलबाट छुटेपछि उनी पार्टीमा सक्रिय भए । विसं २०४० मा देव गुरुङको नेतृत्वमा विद्यार्थी सङ्गठनमा केन्द्रीय सदस्य र पार्टीमा क्षेत्रीय व्युरो सदस्य थिए, उनी । यहाँसम्म आइपुग्दा उनी ‘होल टाइमर’ कार्यकर्ताका रूपमा पार्टीमा सक्रिय भइसकेका थिए ।
पार्टी पातलो मसाल, मोटो मसाल हुँदै एकता केन्द्र बन्दासम्म मातृका क्रान्तिकारी धारमै सक्रिय थिए । २०५०÷५१ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको एकता केन्द्रमा उनी संलग्न भए । उनलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने कुरा भयो । उनी रामवृक्ष यादव मास्टर साहेबलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने अडान राखे र आफू गएनन् । २०५१ मा पार्टीको तेस्रो विस्तारित वैठकपछि पार्टी नेकपा (माओवादी) बन्यो । पार्टी भूमिगत बन्यो । उनी धनुषामा केन्द्रित रहे । २०५६ मा श्रीमतीको उपचारका क्रममा काठमाडौँ आउँदा पक्राउ परे उनी । एक वर्षसम्म उनलाई बेपत्ता पारियो । २०५८ मा फेरि उनी जेलमा परे । २०५९ मा सरकारसँग पहिलो वार्तामा उनी जेल मुक्त भए भने दोस्रो वार्तामा टोलीका सदस्य बने । २०६० मा फेरि दिल्लीबाट पक्राउ परे । २०६३ को वैशाख अन्तिमतिर उनी छुटे ।
उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा वनमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालसँगको विवाद कारण उनी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर हिँडेका थिए । २०६४ मा संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद बने । सभासद भएकै बेला उनी पार्टीबाट अलग भए । पार्टीबाट अलग हुने बेला उनले सभासद्बाट पनि राजीनामा दिए । २०६५ माघ २९ गते माओवादी पुनर्गठन गर्ने भन्दै नेकपा (माओवादी) को संयोजक भएर उनी आन्दोलनमा अघि बढे ।